आवश्यक परे मन्त्री बन्छुः नारायणकाजी श्रेष्ठ – Online Marg
Posted on Friday, January 3rd, 2020 2:59 PM Saturday, January 4th, 2020 10:00 AM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छ। गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका श्रेष्ठलाई नेकपाले राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा हुन लागेको निर्वाचनको उम्मेदवार बनाएको हो। उनको उम्मेदवारीलाई लिएर सकारात्मकरनकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन्।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिने श्रेष्ठसँग राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारीबारे गरिएको वार्ताः
प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेको २ वर्ष नपुग्दै तपाईंलाई पार्टीले किन राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनायो ?
प्रत्यक्ष चुनावबाट तपाईं पन्छिनुभयो भनेर आलोचना हुन थालेको छ नि ?
राष्ट्रिय एजेन्डाका रुपमा पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने मेरो भूमिकालाई यो स्थानले पनि त फरक पार्छ नि१ राष्ट्रियसभामा म केही काम लिएर जान सक्छु, सवाल जवाफ गर्न सक्छु। सुशासन र विकासका विषयमा प्रत्यक्ष काम गर्न सक्छु ।
पार्टीमा त अरु नेताको पनि उत्तिकै भूमिका थियो, होइन र ?
अब मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन गर्दा तपाईंलाई मन्त्री बनाउनेगरी राष्ट्रियसभामा लैजान लाग्नुभएको भन्ने चर्चा छ। तपाईं मन्त्री बन्न तयार हुनुहुन्छ ?
मन्त्रिमण्डलमा रामबहादुर थापासँग सन्तुलत मिलाउन प्रचण्डले यो निर्णय गरेको हो भनिन्छ नि ?
कमरेड प्रचण्डले त्यसरी सोच्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले बादललाई त्यसरी सोच्नु पनि हुन्न। लामो समयदेखि हामी प्रचण्डसँगै छौं। पार्टीभित्र रहेका अनेक खालका गुट र उपगुटको अन्त्य गराउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको मान्यता छ। उहाँ अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेको रुचाउनुहुन्न। गुट अन्त्य गराउनु आफ्नो मुख्य काम रहेको उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ। प्रचण्डसँग लामो समय काम गरेपछि उहाँले अलि बढी अपेक्षा गर्नुभएको हुनसक्छ तर, बादलसँग सन्तुलन मिलाउन होइन। आ–आफ्ना ठाउँ र क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर हो। – नेपालखबरको सहयोगमा
Posted in राजनीतिक तथा सामाजिक कुराकानीTagged #नारायणकाजी श्रेष्ठ